Daryeelka caafimaad ee Iswiidhen haddaad tahay magangelyodoon, qof dhuumasho ku jooga ama aan sharci laheyn/Vård i Sverige om du är asylsökande, gömd eller tillståndslös – somaliska - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Daryeelka caafimaad ee Iswiidhen haddaad tahay magangelyodoon, qof dhuumasho ku jooga ama aan sharci laheyn
Vård i Sverige om du är asylsökande, gömd eller tillståndslös – somaliska
Sidee ayaan u raadsadaa daryeel? (ca 1 sida)
Kaarka LMA (ca 1 sida)
Qiime intee ah ayey dadka waaweyni ka bixinayaan daryeelka caafimaad? (ca 1 sida)
Daryeelka caafimaad ee carruurta iyo dhallinyarada waa lacag la’aan (ca 1 sida)
Xaqa loo leeyahay turjubaan (ca 1 sida)
Baaritaan caafimaad oo lacag la’aan ah oo loogu talagalay carruurta iyo dadka waaweyn (ca 1 sida)
Haddaad tahay qof weyn oo magangelyodoon ah, ama dhuumasho ku jooga ama aan sharci laheyn, waxaad Iswiidhen ka heleysaa in lagu siiyo daryeel caafimaad iyo mid ilko oo aan la sugi karin. Haddii aad ka yar tahay 18 sano,waxaa lagu siinayaa daryeel caafimaad oo u dhigma kan la siiyo dhammaan carruurta ku nool gobolka aad daryeelka ka dooneyso.
Sidee ayaan u raadsadaa daryeel?
Qiime intee ah ayey dadka waaweyni ka bixinayaan daryeelka caafimaad?
Daryeelka caafimaad ee carruurta iyo dhallinyarada waa lacag la’aan
Xaqa loo leeyahay turjubaan
Baaritaan caafimaad oo lacag la’aan ah oo loogu talagalay carruurta iyo dadka waaweyn
Haddaad bukto waxaad booqan kartaa rugta daryeelka caafimaad goob kale oo daryeel caafimaad oo dadka u furan, sida qaybta indhaha ee isbitaal ku yaal gobol kasta oo Iswiidhen ka tirsan. Waxaad kolkaas halkaas kula kulmeysaa kalkaaliye caafimaad ama dhakhtar si aad ugu sheegto dhib ku haysa.
Mar mar waxaa loo baahan karaa warqad dhakhtar kugu soo gudbiyey si aad ugu tagto qayb takhasus oo dadka u furan. Warqaddaas dhakhtarka waxaa ku qoran dhambaal uu dhakhtarka aad la kulantay u dirayo qaybta kale. Warqaddaas waxaa tusaale ahaan ku qoran caafimaadkaaga iyo haddaad horay u soo xanuunsatay. Marka qaybta takhasusku hesho warqaddaas dhakhtarka ayey kuugu yeereysaa inaad dhakhtar la kulanto.
Uma baahnid dhambaal dhakhtar si aad daryeel uga doonato rug daryeel caafimaad.
Haddaad oobaahato daryeel caafimaad oo degdeg ah waxaad la xiriiri kartaa qaybta gargaarka degdegga ah ee isbitaalka. Uma baahnid dhambaal dhakhtar si aad u booqato gargaar degdeg ah.
Inaad u baahan tahay daryeel degdeg ah iyo in kale waxaa go’aaminaya shaqaalaha caafimaadka.
Marka aad daryeel ugu tagto rug daryeel caafimaad, waxaad u sheegeysaa magacaaga, taariikhda dhalashada iyo lambarka telefoonka. Waxaad kaloo tuseysaa kaarka LMA ama caddayn inaad magangelyo codsatay haddaad haysato.
Isla marka aad magangelyo codsato ayey Hay’adda Socdaalku ku siineysaa kaarka LMA. LMA wuxuu taagan yahay (lagen om mottagande av asylsökande), sharciga qaabbilaadda magangelyadoonka. Kaarkuna waa aqoonsi ku meelgaar ah oo aad isticmaaleyso intaad magangelyodoonka tahay. Haddii aadan weli helin kaarka LMA, waxaad tusi kartaa caddaynta inaad magangelyo codsatay.
Marka ugu horreeya oo aad daryeel caafimaad raadineyso waxaa lagu siinayaa lambar kumeelgaar ah. Kaydso lambarka. Waxaadna u baahnaan doontaa inaad isticmaasho mar walba oo daryeel-doon tahay. Haddii horey laguu siiyey lambarka kumeelgaar ah, uu kaa lumay, sheeg magacaaga iyo taariikhda dhalashada.
Gobolada dalka waa ay ku kala duwan tahay da’da kharash laga bixinayo daryeelka caafimaadka iyo ilkaha, laakiin waxaa laga bilaabaa ugu horreyn 18 sano.
Kolkaas kharashyadaan soo socda ayaa laga bixiyaa:
Qiimaha la kulanka dhakhtarka rugta daryeelka caafimaadka waa ugu badnaan 50 kr.
Qiimaha daaweyn dhakhtar kadib dhambaal dhakhtar soo diray waa ugu badnaan 50 kr.
Dhambaal dhakhtar oo laguugu diro rug daryeel oo aan ka ahayn daaweynta dhakhtarka waxaad ka bixineysaa 25 kr. Waxay tusaale ahaan noqon kartaa booqasho lataliye, kalkaaliye caafimaad ama aqoon jirka jimicsi ku daweeya.
Isbitaal ku daaweyntu waa lacag la’aan.
Qiimaha daawo dhakhtar qoray waa ugu badnaan 50 kr.
Daawooyin aysan saamayn xadka qiimaha ugu sarreeya sida daawada qufaca waxaa laga bixinayaa qiime buuxa.
Daryeelka ka hortagga ah ee carruurta iyo hooyooyinka, ilmo-soo-xaaqidda, daryeelka xaamilooyinka iyo ummulintu intuba waa lacag la’aan.
Qiimaha daryeelka ilkaha ee lagu sameeyo rugta daryeelka ilkaha waa ugu badnaan 50 kr. Booqashada labaad ee dhakhtarka ilkaha waxaa laga bixinayaa ugu badnaan 50 kr.
Qiimaha daawooyinku waa ku kala duwan yihiin gobolada.
Haddaad bukaan awgiis u baahan tahay in gaadiid lagu qaado gobolka gudahiisa waxaad bixineysaa ugu badnaan 40 kr. Haddiise aad doorato inaad gobol kale u raacdo, adiga ayaa iska bixinaya qiimaha safarka oo dhan. Taasi waxay khuseysaa carruurta iyo dadka waaweyn labadaba.
Qiimaha aad ka bixineyso daawo dhakhtar kuu qoray xad ayuu leeyahay. Haddaad lix bilood gudahood gaarto qiyaas kharash ah oo aad ka bixisay daryeel caafimaad, mid ilko iyo daawo dhakhtar kuu qoray, waxaad Hay’adda Socdaalka ka codsan kartaa deeq aad ku bixiso wixii qiyaastaas dheer.
Haddaad qabto cudur la isqaadsiiyo oo aad u baahan tahay daaweynta cudurada la isqaadsiiyo wax kharash ah ma bixineyso.
Caadi ahaan daryeelka caafimaad ee dhallinta ka yar 18 sano waa bilaash, laakiin waxaa jira gobolo badan oo ka heli karto daryeel bilaash ah xataa haddaad ka weyn tahay 18. Dhammaan daryeelka ilkaha ee dhallinta ka yar 18 sano waa lacag la’aan.
Daryeelka caafimaad oo lacag-la’aanta ah waxaa ka mid ah:
Rugta daryeelka caafimaadka ilkaha.
Daaweynta gargaarka degdegga ah lacag ayaa laga bixin karaa ama waa lacag la’aan, taas oo ku xiran hadba gobolka aad ku nooshahay.
Lacag la’aan ayaa lagu daaweynayaa ilmaha qaba cudur la isqaadsiiyo oo daaweyn u baahan.
Haddii aadan fahmeyn af-iswiidhishka waxaad xaq u leedahay caawimaad turjubaan markaad booqaneyso goobaha caafimaadka ama kuwa daryeelka ilkaha. Waa lacag la’aan. Adiga ama wakiilkaaga ayaa imaatinka ka hor soo sheegaya inaad u baahan tahay turjumaan. Turjumaankuna goobjoog ayuu ahaanayaa ama telefoon ayuu ku turjumayaa.
Shaqaalaha caafimaadka ayaa go’aan ka gaaraya in turjubaan loo baahan yahay oo dooranaya turjubaanka. Tixgelin ayaa la siinayaa baahidaada turjumaanka haddii hadalku kugu adag yahay ama aad dhegala’dahay. Inaad adigu qof soo wadato waxaa ka wanaagsan in laguu qabto turjumaan caafimaadka ka turjuma. Haddaad soo wadato qof kuu turjuma, rugta daryeelka caafimaadku ma bixin doonto kharashka turjubaanka.
Turjumaanka iyo shaqaalaha caafimaadka waxaa ku waajib ah da xogta
Shaqaalaha caafimaadka iyo turjumaankaba waxaa ku waajib ah xafididda xogta. Taasi waxay la micne tahay in aysan warbixinahaaga u gudbin cid ama kale adigoo aan oggolaan.
Dhammaan dadka waaweyn iyo carruurta magangelyodoonka ah waxaa loogu deeqayaa baaritaan caafimaad oo lacag la’aan ah. Baaritaanka caafimaadka waxaa la samaynayaa si ugu dhaqsaga badan kadib marka la yimaado Iswiidhen. Haddaad sharci-la’aan tahay ama aad isqarineyso waxaa lagugu deeqayaa baaritaan caafimaad markaad soo doonato.
Waxaad baaritaanka caafimaad kula kulmeysaa kalkaaliye caafimaad. Kalkaaliyaha caafimaadku wuxuu baarayaa caafimaadkaaga, isagoo kaa qaadaya dhacaanno si loo ogaado inaad qabto cuduro la isqaadsiiyo. Wuxuu kaaga warramayaa habka daryeelka caafimaadku u shaqeeyo. Waxaana sidaa loo samaynayaa si aad u hesho daryeelka iyo daaweynta aad u baahan tahay.
Tifaftire: Ingemar Karlsson Gadea, Maud Cordenius, 177 Vårdguiden
Hubiye: Olle Olsson, handläggare Avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm
Sawirqaade: Juliana Wiklund
Fekerka ma ka qabtaa qoraalkaan? Tyck till